Hooggantoonii Biyyootii Durooman kan G-20 Dhimma Yukireen Ajandaa Ijoo Godhachuu Malu
Dubbi himtuu Waayit Haaus Jeen Saakii
Bulchiinsi Baayiden dhiibbaa dinagdee addunyaa weerarri Raashiyaa dhaqqabsiise akkasumas Yukireeniin deebisanii ijaaruun ajandaa gumii biyyoota duroomanii kan G-20 irratti mari’achuuf waan qophaa’e fakkaataa jedha gabaasi Paatsii Widaak-swaaraa White House irraa ergame.
Waraansichi ennaa Yukireen keessatti ka’u, prezidaanti Joo Baayiden Raashiyaan gareeelee biyyoota dinagdeen durooman 20 keessaa akka haqamtu akkasumas dhimmi weerara sanaa ajandaa gumii hoogganoota duroomanii kan G-20 keessatti akka hammatamu barbaad jechuu dhaan dubbi himtuun White House Jeenn Saakii VOAf ibsaiiru.
Dhimmootiin kan akka Yukireenii fi Raashiyaan Yukireeniin weeraruu hawaasa addunyaa irra dhiibbaa kaa’uu waltajjiiwwan addunyaa irratti dhimma ijoo ta’uun waanuma baratame. Dinagdee Yukireen deebisanii dandammachiisuu fi deebisanii dhaabuu keessatti hawaasi addunyaa hirmaachuu fi dhimma furmaata itti kennuu qabu jedhan.
Kun immoo dura taa’aa fi qopheessaa gumii G-20 fi kan waggaa kana baatii Sadaasaa keessa Baliitti geggeessamu prezidaantii Indooneesiyaa Joko Widoodoof danqaa dha. Isaanii fi miseensonni sadarkaa giddu galeessaa irra jiran ajandaa ofii isaanii qabu.
Deggersa Beejiiniin, prezidaantiin Raashiyaa Vilaadmiir Putin hamma ammaatti gumii sana irratti hirmaachuuf yaadaa jiru.
Prezidaant Baayiden isaan waliin kutaa sana keessa hin jiraatan. Muummichi ministeeraa Kanadaa Justin Turuudoos hin argaman jedheen yaada. Warreen Awrooppaa hedduunis akkasuma. Kun immoo Jakaartaa haala rakkisaa keessa galcha jedhan.
Qeeqa warreen gama dhiyaa guutuuf Mooskoo moggaatti qooduun ajandaa gumii sanaa danquu dhaan adda addummaa uumuu mala jedhameera.